Mariela Carril | | ကျွန်းများ, ျမန္မာႏုိင္ငံ
ဗမာသို့မဟုတ်မြန်မာ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည် အရှေ့တောင်အာရှ လှပသောရှုခင်းများနှင့်နိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းမှကောင်းချီးပေးသောပထဝီဝင်နယ်မြေနှင့်အတူ။ ရာစုနှစ်များစွာခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်ယနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည် အထူး ဦး တည်ရာအနည်းငယ်သာသိသော်လည်းအလွန်တန်ဖိုးရှိသော။
ငါတို့ပြောမယ် မြိတ်ကျွန်းစုရန်အံ့ဖွယ်ကျွန်းများအစုတခု ရေကူးခြင်း၊ နေပူခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်း။ မင်းရဲ
1 Mergui ကျွန်းများ
2 Mergui ကျွန်းများရှိခရီးသွားလုပ်ငန်း
ဤကျွန်းစုအုပ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်စွန်းတွင်ရှိသည် နှင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။ သူတို့ကပိုပါတယ် 800 ကျွန်းများ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကပ္ပလီပင်လယ်နှင့်မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသို့ရေလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
သား ကျောက်နှင့်ထုံးကျောက်ကျွန်းများနှင့် အပူပိုင်းဒေသအသီးအရွက်များဒီရေတောများ၊ စိုစွတ်သောသစ်တောများ၊ အဖြူရောင်သဲသောင်ပြင်များ၊ အချို့သောကမ်းလွန်ကျောက်စရစ်ခဲကျောက်တန်းများနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများရှိသည်။ ဤကျွန်းများသည်ခရီးသွား routes ည့်သည်များအများဆုံးသွားလာသည့်လမ်းကြောင်းများနှင့်အလှမ်းဝေးနေသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည် သဘာဝပြည်နယ်.
ထို့ကြောင့်ကျွန်းများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပင်လယ်တို့သည်အံ့ဖွယ်ကောင်းသောအပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏နေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ဒါကဒီ site ကိုတစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ အခွင့်ထူးခံရေငုပ် ဦး တည်ရာ နှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ် afရာဝတီဥပမာ - dugongs သို့မဟုတ် whale sharks ။ ၄ င်းတို့မှာဝေလငါးများ၊ အပြာရောင်ဝေလငါးများ၊ orcas များ၊
ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင်မျောက်များ၊ သမင်၊ မရေမတွက်နိုင်သောအပူပိုင်းငှက်များလည်းရှိသည်။ သဘာဝနှင့်လှပမှုရှိသော်လည်းisရိယာသည်အန္တရာယ်မရှိဟုမဆိုလိုပါ၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းတို့သည်အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်၊ ဖြေရှင်းပါ။
အုပ်စု၏အကြီးဆုံးကျွန်းသည်ကျွန်းဖြစ်သည် ကာဒန်ကျွန်းကျွန်းစတုရန်းကီလိုမီတာ ၄၅၀ မြင့်သော ၇၇၇ မီတာမြင့်သောတောင်ဖြစ်သည်။ ဤတောင်သည်ကျွန်းအားလုံး၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်းများကိုပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်သူများမှာမလေးရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှလာရောက်သူများဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းတို့သည် ၂၀ ရာစုအထိလူ ဦး ရေနီးပါးနေထိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်၊ မလေးရှားနှင့်တရုတ်လူမျိုးများဖြတ်သန်းသွားခဲသည့်ဤခက်ခဲသောပထဝီဝင်အနေအထားကိုသွားလာရန်ရဲဝံ့သောသူများဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်းများသို့အများဆုံးလည်ပတ်ခဲ့သူများဖြစ်သည် ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ကျွန်ကုန်သည်များ, ၁၉ ရာစု၏ပထမတစ်ဝက်တွင်ဗြိတိသျှတို့ကသူတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လေ့လာခဲ့ပြီးမြေပုံများရေးဆွဲခဲ့သည်။ ယနေ့ဒေသခံလူ ဦး ရေ၏အမည်အားဖြင့်တတ်၏ Moken သို့မဟုတ်ပင်လယ် gypsies ။ သူတို့ဟာရိုးရာနေထိုင်မှုပုံစံကိုလိုက်နာပြီးငါးဖမ်းခြင်း၊
ကျွန်းများ၏ဝေးလံခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းခြင်းတို့သည်သွေးစွန်းသောဒေသတွင်းသမိုင်းကြောင်းမှခွဲခြားထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်ဤဒေသသည်ဗမာပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအဆိုးရွားဆုံးဒေသဖြစ်ခဲ့ပြီးသမိုင်းတွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအချို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် Mergui Islands တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းစတင်မည်နည်း။ အလယ်ပိုင်းမှာ 90 ရာစု XNUMX မြန်မာအစိုးရနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးခက်ရှိငုပ်နေသောကုမ္ပဏီများအကြားညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြေခံအားဖြင့်ပေါ့ ရေငုပ်ခြင်း, ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ကမ်းခြေ။ ကျွန်းစုများသည်အနည်းငယ်သာစူးစမ်းလေ့လာမှုအလွန်နည်းသဖြင့်ဤရေအားကစားကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ဤတွင်ငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာမတ်နှင့်inပြီတို့တွင်ဖြစ်သည်။ လေနှင့်အပူချိန်နည်းသောကြောင့်ရေကိုကြည်လင်စေသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလမှမေလအထိသင်သည်စတီးဂရပ်များနှင့်ဝေလငါးမန်းများကိုတွေ့နိုင်သည်။
မေလမှဇူလိုင်လအထိကမ်းရိုးတန်းလေများသည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းများပင်ရှိနိုင်သည်။ စဉ်တွင် မိုးရာသီသည်ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်းစုများသို့မေလအစောပိုင်းမှအောက်တိုဘာလအစသို့ရောက်သောသင်္ဘောများမစီးပါ။ အကယ်၍ မုတ်သုန်ရာသီတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာပါကအချို့သောကျွန်းများတွင်ခိုလှုံခွင့်ရရှိသည်။
အခုတော့ ကျွန်းစုကိုသင်ဝင်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရပြီးခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းလိုအပ်သည်။ သင်တစ် ဦး အငှားငှားရမ်းခြင်းနှင့်သင်ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်အလွန်ရိုးရှင်းပေမယ့်တညဉ့်မဟုတ်သည်နှင့်များသောအားဖြင့်တစ်လကြာပါသည်။ အခုအတွက်တော့ နိုင်ငံခြားသားများအနေနှင့်သင်သည်ကျွန်းများသို့လွတ်လပ်စွာသွားလာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ နှင့်ရေတပ်ကင်းလှည့်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးသောအရာအားလုံးရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် option ကိုဖြစ်ပါတယ် ကျွန်းများသို့တစ်ရက်တာခရီးလှည့်လည်ငှားရမ်းခြင်း။
အေဂျင်စီသည်များသောအားဖြင့်ကော့သောင်းလေဆိပ်၌သင့်အားစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်သင့်အားလှေသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ဤသင်္ဘောများသည်ရာသီဥတုကောင်းလျှင်လေးစားသည့်ခရီးစဉ်ကိုအမြဲလိုက်နာလေ့ရှိသော်လည်းကွဲပြားခြားနားမှုများအမြဲရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင့်မှာခရီးစဉ်အကြောင်း၊ သင်မြင်နေ၊ လည်ပတ်နေသည့်အကြောင်းကိုသတင်းများပေးပြီးကျွန်းသူကျွန်းသားများနှင့်စကားပြန်အဖြစ်အမှုဆောင်သောဘုတ်အဖွဲ့တွင်လမ်းညွှန်တစ်ခုရှိပါသည်။ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ယေဘုယျအား အခြေခံလမ်းကြောင်းသည်အစွန်းရောက်တောင်ဘက်မှကောသောင်းအနောက်ဘက်သို့ပြေးသွားသည်။ ဤဒေသတွင်အပန်းဖြေစခန်း (၃) ခု၊ MacLeod ကျွန်းပေါ်ရှိမြန်မာကပ္ပလီ၊ ညောင် ဦး ဖိုက်စူပါဇိမ်ခံဆိုင်များနှင့်ကျောက်သားကျွန်းရှိ Boulder Bay Eco Resort တို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အောက်တိုဘာလမှAprilပြီလကုန်အထိဖွင့်လှစ်သောစျေးကြီးသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်။
လည်း သင်ခရီးတိုများ၊ တစ်နေ့တာခရီးစဉ်များပြုလုပ်နိုင်သည်ကော့သောင်းနှင့်မြိတ်မြို့မှကျွန်းများဆီသို့။ အချို့ခရီးများသည်ကျွန်းများပေါ်တွင်တဲ၌ပင်ညအိပ်လေ့ရှိပြီးဤရွေးချယ်စရာများသည်ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းများထက်အမြဲတမ်းစျေးသက်သာသည်။ ကျွန်းများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပင်စျေးနှုန်းချိုသာသောရက်ပေါင်းများစွာခရီးသည်တင်ယာဉ်များရှိသော်လည်းရက်ပေါင်းများစွာကြာတတ်သည်။
ကျွန်းပေါင်း ၈၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mergui (သို့) Merki ကျွန်းကိုသွားဖို့စီစဉ်တဲ့အခါမင်းရွေးရမယ်။ လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများကဘာလဲ? ဒီမှာသွား၊
Lampi ကျွန်း တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အမျိုးသားရေကြောင်းပန်းခြံ ၎င်းသည်စူပါဇီ ၀ မျိုးကွဲများဖြစ်သောကြောင့် visitors ည့်သည်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ်းရိုးတန်းများ၊ သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ယိုယွင်းစေသောဘုရားမြစ်တစ်ခုလည်းရှိသည်။
ညောင်ဝေကျွန်း - ၎င်းကိုဗုဒ္ဓကျွန်းအဖြစ်လည်းလူသိများသည်။ ကျေးရွာတွေအများကြီးရှိတယ် Moken ကလူ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလေ့လာရန်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ ယခင်ကသူတို့၏ပုံမှန်လှေများ၌ကမ်းရိုးတန်းတွင်ပိုမိုနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်းအစိုးရကမကြာသေးမီကသူတို့ကိုတားမြစ်ထားသဖြင့်ယခုအခါပင်လယ်ပြင်ထက်ကုန်းတွင်းပိုင်းကျေးရွာများပိုမိုများပြားလာသည်။
မြောက်နီကျွန်းအရမ်းကောင်းတဲ့လူတွေလည်းဒီမှာနေတယ်။ visitors ည့်သည်တွေကိုစကားပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့၊ စကားပြန်လုပ်ဖို့ဖိတ်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေတယ်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေများများစားစားမရှိဘူး။
ဖိလာကျွန်း ဒီနေရာတွင်ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေကူးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောရောင်စုံသန္တာကျောက်ဆောင်များနှင့်ပြည့်စုံ။ ဖြူဖွေးနေသောသဲကန္တာရကမ်းခြေများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
အစ္စလာ ၁၀၆Frost ကျွန်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ တစ်ခုရှိ playa blanca သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်သိန်းနှင့်ချီသောအပူပိုင်းဒေသငါးများပေါကြွယ်ဝသောကြည်လင်သန့်ရှင်းသောနွေးသောရေများဖြစ်သည်။ ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းနှင့်တောတွင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရန်အကောင်းဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။
မြန်မာဘဏ်များ ဒါဟာတစျဦးဖွစျသညျ အရှေ့တောင်အာရှ၏အကောင်းဆုံးရေငုပ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ။ သူတို့သည်ကျွန်းစု၏အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ရှိပြီးကမ်းခြေပန်းကန်သည်ပင်လယ်ကြမ်းပြင်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ နက်ရှိုင်းသောနက်နဲသောပင်လယ်နှင့်ငါးမန်း၏မြေ။
Black Rock: ၎င်းသည် busos အတွက်အနှစ်သက်ဆုံးဆိုဒ်လည်းဖြစ်သည်။ ဒေါင်လိုက်ကျောက်ဆောင်များသည်ပင်လယ်ငှက်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သော်လည်းရေပြင်တွင်မင်္ဂလာပါ။
ငါးမန်းဂူ၄ င်းသည်အမှန်အားဖြင့်ပင်လယ်မှမီတာ ၄၀ ခန့် ထွက်၍ ကျောက်တုံးသုံးခုနှင့်၎င်း၏ရေနေဝန်းကျင်တွင်အဏ္ဏဝါသက်ရှိများစွာနေထိုင်သောကျောက်တုံးသုံးခုဖြစ်သည်။ ရေငုပ်၏တစ်နေ့တာသင် site ကိုအပြည့်အဝမသိနိုင်ပါ။ တကယ်လို့မင်းကအရမ်းကို buso ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မီးတောင်ကြီးတွေကအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဂူထဲမှာကြီးမားတဲ့ချောက်ကြီးတောင်ရှိတယ်။
Little Torres ကျွန်းများ ဤလှပသောကျွန်းများပတ်လည်တွင်လှပသောသန္တာကျောက်တန်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အပျော်စီးသင်္ဘောများ၊ ကမ်းခြေများ၊ ရေငုပ်ခြင်း၊ တောတောင်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရေငုပ်ခြင်းများအပြင် Mergui ကျွန်းများသည် ငါးမျှားသွားပါ သင်္ဘောပေါ်တွင်ဤသည်မှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်သည့်အတွက်ထိုနေ့၏အဆုံးတွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာများကိုငါးမျှားရန်နှင့်ချက်ပြုတ်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်သည်လုံးဝပြီးဆုံးသွားသည်။
ဘယ်လိုလဲ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုအကွာအဝေးရှိကမ်းခြေ၊ ကျွန်းများ၊ ပင်လယ်၊ နေရောင်များနှင့်ကမ္ဘာ၏သေးငယ်သောထောင့်တွင်ရှိနေသည်ဆိုပါစို့။ အားလပ်ရက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » နိုင်ငံများ » ျမန္မာႏုိင္ငံ » Mergui ကျွန်းများသည်မြန်မာနိုင်ငံရှိလျှို့ဝှက်ရတနာတစ်ခု